Sidee loo qoraa:
Geeraar jaceyl ah oo gaaban?
Geeraar jaceyl oo amaan ah?
Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh?
Heeso qoraal ah oo macaan?
Raaxada ragga ay jecelyihiin
Waxaan jaceyl u qaaday lamaanaheyga, waxaana doonayaa in aan la wadaago dareenkeyga, waxaa dhab iga ah jaceylka aan u hayo mana doonayo in ay iga dheeraato. Waxa ay kasbatay qalbigeyg mana jiro ruux aan iyada ka doorbidayo.
Marwalbaa waxaa ii sawiran arageeda farxada badan, dabeecadeeda wanaagsan, indhaheedana naxariista leh, Dhoola cadeynteeda qushuuca leh, dhabanadeeda cajiibka ah, dhexdeeda taakada ah.
Alla Alla mar lee meey oorideyda noqoto..
Intaas oo keliya kuma eko ee waxa ay badashay dabeecadaheyga, waxa aan noqday maxbuus qof iyada uun ka fikiro, qalbi kalena aanan lahayn.
Hadaba waxaan rabaa in aan u qoro geeraar jaceyl ah oo gaaban xiiliyada ay hurdada ka soo kaceyso sida subaxdii oo kale ama habeenkii waqtiga ay seexaneyso, si,aan u noqdo haraaga qalbigeeda, Qofka ugu danbeeyo xusuusteeda. Ha eegto telkeeda, hana xusuusnaato in aan u hayo jaceyl dhab ah.
Jaceylku waa dareen qurux badan laakin nasiib daro qof walbaa ma dareemo. Waxaan maqli jiray hees uu qaaday fanaanka caanka ah ee Cabduqaadir Jubba, heestaas oo ahayd hees jaceyl ah oo weliba xambaarsan dareen aad u qurux badan.
Heestaasi erayadeeda waxaa kamid ah:
Ma ii ihiilineysaaaa
Ma ii hagar baxeysaaa
Goormaan ku helayaaa?
Baro 8 sadar oo ka qurux badan waan ku jeclahay
Aan isweydiino naftu maxay u baahantahay?
Jawaabta: Erayo Jaceyl ah weliba geeraar jaceyl ah oo soo jiidasho leh.
Sidee loo qoraa geeraar jaceyl ah oo gaaban?
Jawaabta: Weey fududahay, waxaana kuu fududeeyay Somger.
1. Geeraar jaceyl ah oo gaaban
Adaan kaa arkoodoo
Ifka noloshu waa adi
Aayar socodka laafyaha
Afka dahab lamoodiyo
Itaalkiyo indhaha wacan
Aqoontiyo wax garashada
Ilaahay u mahadceli
Astur weeye dumarkuye
Aqal kaalay ila unug
Abaaraha aan moodnee.
2. Geeraar jaceyl ah oo gaaban
Naftaan kuu baahanoo
baaqi ay ku tahay wali
ma baxnaanin karaysaa?
3. Geeraar jaceyl ah oo gaaban
Cirrada aad arkeesana
Cimri kuma imaanine
Adigu aad cidleesaye
Ha canaadin ruuxaad
4. Geeraar jaceyl ah oo gaaban
Queen adiga mooyee
Koow madhaho hablaha kale
Kalaankayga uma furo
Hablaha koonkaan ku nool
Kashayda adaa ku nool
Kubeeray kalgacal dhabee
Kadhawr kurbadiyo kadeed.
5. Geeraar jaceyl ah oo gaaban
Sida u aad udhigantahay
Kaa soocday dumarkee
6. Geeraar jaceyl ah oo gaaban
Ubax soo baxaayoo
Ayaad iila meel tahay
Adkeysan meysu nafteyduye
Inta dunida joogto adigaan
Kaa doortay u hadaaqdaa nafteyduye
Inta qurux la sheegana adigeey kuu dhamaatay
Ogow gacaliso in aad tahay
Udub dhexaadkii nolosheyda.